Home Wararka Isimada Puntland iyo Somaliland oo ku baaqay joojinta dagaalka ka socda Saax-maygaag
Isimada Puntland iyo Somaliland oo ku baaqay joojinta dagaalka ka socda Saax-maygaag
Isimada iy odoyaasha dhaqanka ee ka soo jeeda Puntland iyo Somaliland ayaa ku baaqay joojinta dagaalka ka socda Saax-maygaag. Islaan Ciise Islaan Maxamed iyo suldaan Siciid Maxamed Garaase oo ay weheliyaan qaar kamid ah Cuqaasha iyo Nabaddoonada Gobolka Nugaal ayaa gaaray dhulkii shalay lagu dagaallamay.
Islaan Ciise iyo suldaan Siciid ayaa la kulmay Garab kamid ah dhinacyadii dagaallamay si loo joojiyo xiisadda colaadeed ee labada dhinac islamarkaana loo bilaabo waan-waan nabadeed. Xaaladda Saax-maygaag ayaa maanta deggan kadib dagaal khasaare xooggan gaystay oo halkaas shalay ku dhexmaray labada dhinac.
Colaaddaas oo soo noq-noqotay ayaa salka ku haysa muran ka taagan degaamaynta Saax-maygaag iyo Senge-jebiye.
Previous articleAl-Shabaab oo sheegatay inay weerar ka geeysteen degaanka Lamu ee Kenya
Next article[Wararkii u Danbeeyay] Guddi ka socda Mucaaradka oo la kulmaya Golaha Wadatashiga Qaran
Ciidamada DFS katirsan oo qarax lagula eegtay Duleedka Dagmada Balcad
Fashilkii ugu horeeyay ee Rooble galo waa magacaabida Dhageey iyo Dhagdheer